समाचार - किंगदाओ फ्लोरेसन्स ट्यूब वाणिज्यिक युद्ध फलाम सेना विशेष प्रशिक्षण शिविर
मे १२ देखि मे १ 13, २०२० सम्म, क्विंगदाओ फ्लोरोसेंस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कं, लि। हामी सबैलाई तालिम दिन चा Chan्गकिing इन्डस्ट्रियल ग्रुपबाट मिस्टर आमन्त्रित गर्नको लागि भाग्यशाली थियो। यी दुई दिनमा, सहकर्मीहरू सबै सक्रिय रूपमा भाग लिए, सक्रियतापूर्वक अध्ययन गरे र धेरै प्राप्त गरे, र म तपाईंको समर्पणको लागि श्री गाय र श्री धन्यवाद दिन चाहन्छु।
होस्ट प्रशिक्षण सत्र को सामग्री र घटना नियमहरु प्रस्तुत गर्न देखा पर्‍यो।
शिक्षक Mras तपाइँको भावुक विवरण
शिक्षक तपाईको नेतृत्वमा सबैजना छिटो नै उच्च शिक्षाको वातावरणमा प्रवेश गरे। तलको चित्रले श्रीलाई देखाउँदछ कि कसरी तपाईं वास्तविक काममा W डब्लू विधि लागू गर्ने भनेर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा संलग्न सबै साथीहरूले सक्रियताका साथ भाग लिए। सबैले एक उत्साहित वातावरण संग उत्साहपूर्वक कुराकानी गरे
प्रशिक्षणको एक दिन पछि, शिक्षक तपाईले सबैलाई समूहमा एक अर्कासँग आफ्नो भाषणहरू बाँड्न भन्नुभयो। सबैले उत्साहपूर्वक र सक्रियताका साथ यस दिन सिकेको बिभिन्न काम सीपहरू साझा गरे, र कसरी सिद्धान्तहरू व्यवहारिक काममा लागू गर्ने।
तपाइँको प्रयास र खेती को लागी धन्यवाद! तपाईंको योगदान र समर्थन को लागि धन्यवाद! क्विंगदाओ फ्लोरेन्स कम्पनी "उद्यम सदाबहार" पनि हुनेछ!
फ्लोरेन्सले लामा भेगास, अमेरिका, नोभेम्बर --8 मा सेमा शोमा भाग लिनेछ।
हामी हाम्रो उत्पादनहरू टायर भित्री ट्युब र त्यहाँ फ्लपहरू देखाउनेछौं, तपाईंलाई बुथ 12१२२ at मा भेट्न अगाडि हेर्दै!
हामी टायरको लागि ब्यटेल भित्री ट्युब र प्राकृतिक रबर ट्यूबहरू आपूर्ति गर्न सक्दछौं।
ATV टायर इनर ट्यूब
Wheelbarrow टायर इनर ट्यूब
ट्र्याक्टर टायर इनर ट्यूब
OTR टायर इनर ट्यूब
भारी शुल्क रबर ट्यूब नदी स्विम फ्लोट ट्यूब
हिउँ स्की स्लेज ट्यूब